सुनको मूल्य लगातार ओरालो, कति पर्छ तोलाको ? - Nepal's Digital News Paper
सुनको मूल्य लगातार ओरालो, कति पर्छ तोलाको ?
काठमाडौं । दुई महिनासम्म उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो साता ओरालो झरेको छ । गत साताको शुक्रबारसम्म वृद्धि भएको सुनको मूल्य आइतबारदेखि ओरालो क्रममा छ । शनिबार प्रतितोला ७२ हजारमा कारोबार भएको छापावाला सुन आइतबार ५ सय घटेर ७१ हजार ५ सय पुगेको थियो । मंगलबार ७१ हजारमा झरेको थियो । बुधबार भने सुनको मूल्य स्थिर रह्यो ।
बिहीबार प्रतितोला रु २०० ले गिरावट आएको छ । छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ८ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजाबी २ सयले घटेको छ । यो सुनको मूल्य ७० हजार ५ सय निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ । बुधबार प्रतितोला ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य रु पाँचले घटेर रु ८७५ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य ओरालो लागेको छ । विश्व बजारमा प्रतिऔस ए१ हजार ५०२.४० अमेरिकी डलर छ । केहीअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔस १ हजार ५४० डलरसम्म पुगेको थियो ।